Axmed Madoobe: ‘‘Khilaafkii DF Somaliya iyo Jubbaland waa la xaliyay‘‘ – HalQaran.com
Axmed Madoobe: ‘‘Khilaafkii DF Somaliya iyo Jubbaland waa la xaliyay‘‘
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in is afgarad buuxa laga gaaray khilaafkii kala dhaxeeyay Maamulkiisa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ka dhashay doorashadii uu kusoo baxay ee ka dhacday Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in wada-hadallo hoose oo maalmihi la soo dhaafay dhex-maray madaxda Sare ee Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada ee ku wada sugan Dhuusamareeb si hoose wax loo xeeriyay,isla markaana tanaasul fara badan la sameeyay.
Kulamo gaar gaar ah oo isaga & Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku dhexmaray Magaalada Dhuusamareeb, ayaa xal buuxa looga gaaray Khilaafkii ka dhashay Doorashadiisa ee ka dhacday Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inuu u mahadcelinaayo madaxda Dowladda Federalka Somaliya ee ka shaqeeyay qabsoomida Shirkii ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb ee madaxda DFS & kuwa Maamul Goboledyada ay uga wada hadleen arrimaha Doorashooyinka.
Ugu dambeysay, Shirkii ku soo dhamaaday Magaalada Dhuusamareb ee Madaxda Dowladda Federalka Somaliya & kuwa Dowlad Goboledyada yeeshen faa’iidada ka dhalatay ayaa waxa ay aheyd in madaxda DFS & Dowlad Goboledyada si gaar gaar ah u xalisteen dhamaan tabashooyinkii ay kala qabeen oo ay isfagarad buuxa wada gaaren.
Tags: Axmed Madoobe, Farmaajo, Khilaafka Dowladda, Waa la xaliyay
Somali FG and FMS leaders to meet in August to agree on election model
Faah-Faahin ku saabsan qarax xooggan oo maanta ka dhacay Muqdisho